Ikati yaseBritish Shorthair | Amakati eNoti
Ikati IBritish Shorthair Luhlobo olungathandekiyo lweekati: uthando kakhulu, ukudlala, ukukrelekrele, ekonwabela impilo entle. Inkangeleko anayo inomdla, kwaye kukuba unamehlo amakhulu anokuthambisa intliziyo yakho ngokujonga nje kubo.
Ukuba ujonge inkomo yasekhaya ukuchitha ixesha elininzi kwaye limnandi kakhulu, iBritish Shorthair inokuba liqabane olifunayo.
1 Imvelaphi kunye nembali yekati yaseBritane Shorthair
2.1 IBritish Shorthair Blue
3 Unjani umlinganiswa wakho?
4 Unonophelo lweBritish Shorthair
6 Ixabisa malini iBritish Shorthair?
6.1 Ngaba iikati zaseBritane ezimfutshane zingafunyanwa ukuze zamkelwe?
7 Iifoto zekati zaseBritish Shorthair
Imvelaphi kunye nembali yekati yaseBritane Shorthair
Umntu wethu ophambili uvela e-United Kingdom, njengoko igama lakhe libonisa; Nangona kunjalo, iikati zasekhaya zaseRoma ngookhokho babo. Yeyona nzala indala yesiNgesi, kwaye yenye yezo zivusa eyona mbeko kunye nokunconywa phakathi kwabo bathanda iikati. Kwixesha elidlulileyo yayisetyenziselwa ukulawula inani leentonga, kodwa kungekudala yafumana ukuthembela ebantwini, njengoko kwafumaniseka ukuba inyanisekile kubo.
Nangona kunjalo, kwaqala ukuza kuthi ga kwinkulungwane ye-XNUMX ukuqala kokuzala. Ngo-1871, i-Harrison Weir yase-Bhritane, yenza uphando malunga nokuzala okusekelwe kwiikati ezaziboniswe okokuqala e-Crystal Palace eLondon. Umboniso apho wafumana khona abalandeli abaninzi. Kulapho ke kwathiwa igama iBritish Shorthair ukuze ingabhidanisi nekati yaseMpuma okanye iAngora.
Ngexesha leemfazwe ezimbini zehlabathi, uhlobo lwalusecicini lokuphela, ukuze balusindise kwakufuneka babhenele kwabanye, njengekati yasePersi., ukuzama ukuyibuyisa. Le minqamlezo ikhokelele kwikati enentloko ejikeleze ngakumbi, imilenze eyomeleleyo kunye nombala wamehlo ngakumbi, ukongeza kwiinwele ezinde zasePersi. Kuthathe iminyaka emininzi yokukhetha ukuzalisa ukuphelisa le nto yokugqibela, ukwahlula iikati ezimfutshane zaseBritane kwizinwele ezinde.
Inja enemilenze emine enoboya, inobunzima obuyi-6 ukuya kwi-8 kg, sisilwanyana esibonakala ngokuba nentloko enkulu kunye neendlebe ezijikeleziweyo. Ezi zokugqibela zahlulwe ngokubanzi, kwaye zinobunxantathu ukumila. Amehlo makhulu, anombala ongqongqo.
Umzimba wakhe womelele kwaye womelele, ikhuselwe ngengubo emfutshane, eshinyeneyo kunye nethambileyo enokuba nawuphina umbala (omhlophe, omnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, itricolor, itshokholethi, isilivere, igolide, i-lilac, isinamon, i-fawn, i-bicolor). Nangona zonke iintlobo zintle, iBritish Shorthair eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neBritish Shorthair emhlophe zezona zidumileyo. Kwaye ayisiyonto ingezantsi: ukujonga kwakhe, esele kuyindida, kuyamangalisa. Ukuba awundikholelwa, masibazi kancinci:
IBritish Shorthair Blue
Ikati laseBritane elifutshane eliluhlaza okwesibhakabhaka linobume bamehlo balo obuhle, obunombala o-orenji obunamandla, obunika ukubonakala okumnandi kunye nokuthamba.
Umfanekiso-Cat Cat Breeds Encyclopedia
Ikati emfutshane yaseBritane emhlophe emhlophe iyamangalisa nangakumbi ukuba kunokwenzeka, kuba inokuba namehlo eorenji okanye aluhlaza, okanye umbala omnye kumbala ngamnye, kwaye inenwele ezimhlophe, ukubonakala kwayo kutsala umdla omkhulu.
Unjani umlinganiswa wakho?
Umlinganiswa wale kati uxabisekileyo uyamangalisa. Unothando, uyadlala, uyavuya. Uyakuthanda ukuba kunye nosapho, nokuba angakanani na amalungu alo, kwaye utyekele ekuhlalisaneni kakuhle nezinye izilwanyana (izinja neekati) ngokunjalo.
Ekuphela kwento "engathandekiyo" esinokuthi yiyo ixhomekeke kakhulu kwezinye iikati. Akakuthandi ukuchitha ixesha eyedwa, kwaye enyanisweni, kunokwenzeka ukuba ayokugqibela esilandela kuyo yonke indlu kwaye akafuni ukohlukana nathi okomzuzwana. Ukuphumla, iyikati efanelekileyo ukuba iflethi okanye indlu, kuba iyaziqhelanisa nexesha elide.
Unonophelo lweBritish Shorthair
Ikati elifutshane laseBritane, njengazo zonke iikati, ifuna amanzi amatsha nacocekileyo, ukutya okusemgangathweni (ngaphandle kweesiriyeli okanye iimveliso ezivela ngaphandle), kunye nokuxubha imihla ngemihla ukunqanda ukuyilwa kwezinto ezoyikekayo iibhola zeenwele. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa amaxesha ngamaxesha kuza kufuneka simse kugqirha wezilwanyana, nokuba kukubeka izitofu eziyimfuneko, ngenxa ukuthena / ukutshiza kwaye ngalo lonke ixesha sikrokrela ukuba uyagula.
Nangona oku akwanelanga. Njengoko besitshilo ngaphambili, kubaluleke kakhulu ukuchitha ixesha, dlala naye, bukela naye umabonwakude, njl. Ukhuthele kakhulu kwaye kufuneka ahambe, enze imithambo. Ngesi sizathu, ukonwaba kwaye kufanelekile, kuya kufuneka unikezele iiseshoni ezintathu okanye ezine ezifutshane ngemini, zihlala malunga nemizuzu emi-5 inye. Kwiivenkile zezilwanyana siza kufumana ezininzi iikati zokudlala esiza konwaba ngalo.
Nangona luhlobo olusempilweni ngokubanzi, kunokuba nezi zifo:
Feline coronavirus: Isasazeka yintsholongwane ye-corona ehlasela ikakhulu iiseli zamathumbu ekati, ibangele isifo esiswini okanye esingapheliyo.
Feline panleucopeina: Sisifo esosulelayo kakhulu esibangelwa yiparvovirus ehlasela kakhulu iikati ezincinci ezingagonywanga, zibangele iimpawu ezinjengokugabha kunye norhudo olunegazi, ukuphelelwa ngumdla wokutya kunye nomkhuhlane.
Hypertrophic cardiomyopathy: sisifo semfuza. Kubangela ukuqina kobunzima be-myocardial ye-ventricle yasekhohlo, ebangela ukusilela kwinkqubo yokujikeleza kwegazi.
Isifo sezintso sePolycystic: ibonakaliswa bubukho beetystiki kwizintso ezicinezela izicwili kunye nokukhusela izintso ekusebenzeni kakuhle. Ukuba ikati inesi sifo, iya kuba neempawu ezinjengokuphelelwa ngumdla wokutya kunye nobunzima, ukugabha, ukungabi noluhlu, kunye nokwanda kokusetyenziswa kwamanzi (oku kuyakwenza ukuba ichame ngakumbi).
Ixabisa malini iBritish Shorthair?
Ukuba uzimisele ukufumana injana yolu hlobo lubalaseleyo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba ixabiso limalunga 500 euro.
Ngaba iikati zaseBritane ezimfutshane zingafunyanwa ukuze zamkelwe?
Kunzima. Ukuba luhlobo olusulungekileyo, kwaye nalo luyathandeka, kuyinto eqhelekileyo ukuba kungabikho ukwamkelwa. Kodwa oko akuthethi ukuba abanakufumaneka. Ngapha koko, ukuba ufuna ngenene ukuhlala nekati yolu hlobo, sicebisa ukuba undwendwele okanye unxibelelane nemibutho kunye neendawo zokukhusela izilwanyana, kunye neenkuku kwindawo yakho.
Iifoto zekati zaseBritish Shorthair
Apha siqhoboshela ezinye:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Ikati yaseBritish Shorthair
Ixabiso kwikennel elibi liphezulu kune- € 500, kodwa umgangatho awunanto yakwenza noko kuthengiweyo ngexabiso okanye ngaphantsi. Bandiqhatha bathengisa ikati nge-450 euros, ekugqibeleni yayingeyiyo eyaseBritane (yayiyikati engwevu), yayigula, ngaphandle kozala ... kwafuneka ukuba ilaliswe esibhedlele kwaye ekugqibeleni yafa, ixesha elibi kakhulu. Ekugqibeleni saguqukela kwikhathalogu ye-ASFE kwaye yonke into yayintle, ikati entle kwaye esempilweni.
UJose Antonio Campos Gonzalez sitsho
Ndingayifumana phi ikati ebritish eluhlaza okwesibhakabhaka nceda enkosi
Phendula kuJosé Antonio Campos González
Sicebisa ukuba ubuze kwikliniki yezilwanyana. Mhlawumbi banokukunceda.